CMdị ahịa ise ise CMO kwesịrị ime ihe na 2020 | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 17, 2019 Tọzdee, Disemba 17, 2019 Ọ bụ Jay Atcheson
Ihe mere ịga nke ọma ji dabere na atụmatụ aghụghọ.
N'agbanyeghi mmefu ego ahia, ndi CMO ka na-enwe nchekwube banyere ikike ha nwere iru ihe ha choro na 2020 dika Gartner na-eme kwa afọ 2019-2020 CMO Spend Survey. Mana nchekwube n'emeghị ihe ọ bụla na-arụpụta ihe na ọtụtụ CMO nwere ike ghara ịhazi atụmatụ maka oge siri ike n'ihu.
Ndị CMO na-eme ngwa ngwa ugbu a karịa ka ha dị n'oge ọdịda akụ na ụba ikpeazụ, mana nke ahụ apụtaghị na ha nwere ike ịda mbà iji gbaga ebe siri ike. Ha ga-aga n’ihu. Iji nwee ọganiihu na mbara igwe nke na-agbadata mmefu ego nke sara mbara nke njikwa na ebilite olile anya, ndị CMO kwesịrị iji akụ ha jiri amamihe, nabata teknụzụ ọhụụ ma gbanwee ngwa ngwa ịgbanwe.
Ndị a bụ ndị ahịa ahịa ise na - apụta ga - eme ihe iji hụ na ha meriri na 2020, na gafere.
Omume nke oge 1: Mejuputa Digital Management Asset System
Mkpakọrịta na-ada nke ọdịnaya bụ eze enweela ọtụtụ afọ mana ka teknụzụ na-akawanye mma, 2020 nwere ike mechaa nyefee ndị na-ere ahịa ozi ọma. Knowingmara ihe ọdịnaya dị irè ma ọ bụ nke dị irè abụghị ọrụ dị mfe n'ihi ụzọ dịgasị iche iche maka ịchekwa akụ anyị bara ụba. Mgbe ọgbọ dị ugbu a nke Nchịkọta Njikwa ọdịnaya (CMS) nyiwe biara n'ahịa, erere ndi ahia na nkwa na ha nwere ike iji ha hazie ọdịnaya ha, mana n'eziokwu, usoro ndi ahu adighi centralized ọdịnaya ehiwe. Iji mezuo mkpa njikwa njikwa ọdịnaya ha, ndị ahịa kwesịrị itinye ego na a ugbu a sistemụ njikwa akụ dijitalụ (DAM) nke nwere ike ịkwado ihe ahịa ahịa ha niile, na-eme ka arụmọrụ na-aga n'ihu ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Usoro DAM na-aghọ ngwa ọrụ kachasị amasị maka ịhazi na ịkwalite ọdịnaya n'ime ọwa niile. Ha na-enyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ nke ọma n'ihi na ha nwere ike ịkwalite ọdịnaya dị ugbu a karịa, karịa ịpị ndị na-ere ahịa ka ha mepụta ọdịnaya ọhụrụ maka mkpa ọ bụla. Usoro DAM nwekwara ike inye nghọta n'ime ụdị ụdị ọdịnaya na-arụ ọrụ kachasị mma na nke ikpo okwu, na-eme ka itinye ego mkpọsa dịkwuo irè.
Nddị na-apụta: Echiche Gị Nhazi
Ndị na-ere ahịa na-agbanye ndị keonwe envelopu, na-achọsi ike ịnapụta ahụmịhe kwesịrị ekwesị maka ndị ahịa ọ bụla. Mana tupu ndị ahịa ere ahịa nkwa, ha ga-ahụrịrị na ndị ọrụ aka na teknụzụ nwere ike ịnye nsonaazụ ha na-achọ. Ngwá ọrụ ọhụụ na-anwale nnwale nke ọma na-egosi etu mbọ ndị mmadụ na-ewu ewu nwere ike ọ gaghị ekwenye mmetụta achọrọ na ebe ohere dị mkpa ka dị.
Nhazi nke onwe bu ihe n’aga n’ihu ma enwere ohere kari imeziwanye n’ihi na uzo nile nke wetara nti ihe n’aho gara aga nwere ike iwelata nloghachi taata. Mepụta ọdịnaya ndị ahaziri iche nke na-emetụta ndị ahịa ga-adabere na ọkwa nke mmadụ na nkewa usoro ịzụ ahịa dị iche. Nke ahụ pụtara ịnweta ngwụcha nke nghọta sitere na data azụmaahịa niile - CMS, ọwa na-apụ apụ, nyocha UX, email na ndị ọzọ - na iji ha na-agbanwe usoro ịhazi onwe gị mgbe niile iji mepụta mgbanwe mgbasa ozi ọzọ.
Gingdị na-apụta 3: Mee ka Omenala Ndị Ahịa gị gbanwee
Na-aga n'ihu ahịa centricity n'ime ụlọ ọrụ B2C na B2B emeela ka ndị na-ere ahịa were ọrụ ndị ọzọ na-ahụkarị ma dị oke egwu n'ime nzukọ ha - ọ bụghịkwa ihe ijuanya. Ndị na-ere ahịa nwere nka iji kpalite ebumnuche omume na nghọta. Ndị na-ere ahịa bụkwa ọkachamara na nkwukọrịta na mmekorita ma nwee ike ikpebi ihe ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ndị ahịa.
Oge agafeela iji nweta nghọta ndabere nke ihe ndị ahịa chọrọ, kesara ya na otu ndị na-ahụ maka akaụntụ na ịtọ ya na okwute. Enweela ikike ugbu a iji kpalie ụlọ ọrụ na-azụ ahịa nke na-achọ ịdepụta njem ndị ahịa na ịchọpụta ohere iji Chaị ahịa.
Na 2020, ndị na - ere ahịa nwere ike ịbụ mkpọ nke na-eme ka IT, ahịa, arụmọrụ na otu ndị otu jikọtara ọnụ iji mekwuo oge eziokwu ndị ahụ na njem ndị ahịa. Ha ga - enyere ndị otu ndị ọzọ nọ na nzukọ ha aka imezu ihe ha rọrọ na ndị ahịa na ụzọ nwere ike ịba ha.
Dị na-apụta 4: Na-arụkọ ọrụ ọnụ iji zụlite ìgwè kachasị mma
Chọpụta na ị na-ewe nnukwu talent na-asọ mpi nke ukwuu, ma na-enweta ya karịa. Na gburugburu ebe a, ndị na-ewe ndị ọrụ na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ, ebe ahịa nwere ike ịbụ ezigbo onye mmekọ maka inweta ikike na njide.
Ndị na-ere ahịa taa nwere ike iji ikike nghọta dijitalụ chọpụta ngwa ngwa ọwa ndị kachasị arụ ọrụ, ebe ndị na-ege ha ntị nọ, na ozi dị a willaa ga-enyere gị aka ịpụ. Anyị nwekwara ọrụ maka ịkọba akụkọ akụkọ na ịkọwa uru dị iche, nke nwere ike ịba uru na usoro ị nweta ego.
Mpempe ahia di iche iche iji mee ka ndi oru nyocha ga-eme ka ndi ntinye aha ndi kariri elu ma nwekwa onu ogugu. A na-ejikọ ngwa ngwa nkwado ngwa ngwa na sistemụ ndị ọzọ, enwere ike ịnweta ya na ngwaọrụ nkeonwe ma nwee ike iwulite ọrụ dị oke mkpa.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ ugbu a nụchara ha ọnụahịa ndị ọrụ bara uru (EVP), wiil ndị ahụ nwere ike ọ gaghị amalite imegharị. Kwalite ndị ọrụ gị dị ugbu a iji bulie EVP gị bụ isi iyi bara uru ma dị mma.
Gingdị na-agbanwe agbanwe 5: Mee ka nghọta data zuru ezu
Dika mmefu ego ahia na-agbada, data na-adi oke nkpa nye ndi ahia ka nghọta doro anya na-enyere aka hụ na ụlọ ọrụ na-achọpụta ihe ha nwere, nweta nsonaazụ na ịchekwa asọmpi asọmpi ha. Ọ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ nwere akụrụngwa ịghọta ozi ahụ ma tinye ya n'ọrụ n'oge kwesịrị ekwesị, mana nsogbu ka dị. Otu bụ na data na-adị oke oke taa, ekpochi ya na ngalaba na sistemụ dị iche iche. Ihe ịma aka ọzọ bụ na enweghị ndị ọkachamara data zuru oke n'ime ụlọ ọrụ iji mepee ihe ọ pụtara na ikike ya.
Iji nweta ihe kachasị na data na 2020, ndị na-ere ahịa kwesịrị iweta data na-arụ ọrụ na mkpokọta ihe omuma ahia ahia ebe ha nwere ike nweta echiche zuru oke. Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịchọpụta otu ndị ọkachamara data n'ime ụlọ ọrụ nwere ike isi zụọ ndị ọzọ, yabụ nye ndị ọrụ ikike ka ha nwee nghọta banyere data ha na-arụ ọrụ.
Ndị na-ere ahịa bụ ndị na-anabata dijitalụ mbụ, na-ewuworị ikike ịzụta na amụma ụdị. Ringkesa nka a n’ahia ngalaba ahia nwere ike irite uru ndi n’aru ya ma kpughee onu ahia ohuru.
N'ihi ọganihu niile na dijitalụ na nchịkọta, òtù ndị na-ere ahịa nwere ike ịdị mfe iji nweta uru. N'ime akụ na ụba na-agbanwe ngwa ngwa, ikike ịmegharị ngwa ngwa ma na-agbaso ngwa ngwa ga-abụ ihe dị iche n'etiti ịkwado n'ihu na ịda n'azụ. Ọkpụkpụ nwayọ nke mmefu ego azụmaahịa bụ ihe na-egosi na ụlọ ọrụ na-akpachara anya, ndị ahịa anaghị achọ ịzọ ụkwụ ha. Ugbu a abụghị oge iji nwee ahụ iru ala, mana ịchọ ohere iji nwekwuo ROI nke nwere ike ọ bụghị na afọ gara aga.
Tags: 2020KeduCMO nọrọahịa-centric omenalaabụrụ ọnọdụgartnermee roiahịa datamarketing atụmatụtalent ahịaotu ahiaahia ahiakeonweìgwè
Ọ bụ Jay Atcheson
Jay Atcheson bụ SVP nke Ahịa na R2i. Jay erere ngwaahịa na ọrụ na US, Canada, Asia na Europe. Na-elekwasị anya n'ihe ọhụrụ na nsonaazụ ahịa na-akpata, Jay bụ onye na-elekwasị anya na onye ahịa.
Igodo ndị dị mkpa Mgbe ịhọrọ usoro ire ere (POS)